China Glittering Lapel Izikhonkwane ifektri nabakhiqizi | Kingtai
Ama-glitters enziwe ngama-sequin amancane (ngokuvamile alingana nopelepele) abonisa ukukhanya.
Siyazi sisesikoleni samabanga aphansi ukuthi i-glitter ihlobene nemisebenzi yethu yezandla noma imihlobiso kaKhisimusi.
Ngenxa yomphumela wayo omuhle kakhulu, i-glitter ibuye isetshenziswe kabanzi kumaphini okuhweba e-Baseball, adayiswa minyaka yonke eCooperstown, ePennsylvania.
Letha i-bling kumaphini akho e-lapel ngokusebenzisa i-glitter
I-Glitter ivamise ukusetshenziselwa ukugqamisa igama leqembu noma ukuhlobisa i-mascot yalo.Iza ngemibala eminingi, okuhlanganisa obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, oluhlaza okotshani, owolintshi, opinki, omnyama, omhlophe njalo njalo.
Akudingekile ukukhawulela ukukhetha kwakho endaweni eyodwa. Ungabeka i-glitter noma kuphi lapho uthanda khona. Ngokuvamile, izindleko zesiko ngalinye amasenti angu-15. Nokho, isibonelo, uma ufuna ukukhanyisa iphinikhodi yakho yokuhweba esibhakabhakeni kanye ne-mascot, izobiza u-30 ngephinikhodi ngayinye njengoba yengezwe emininingwaneni yephinikhodi engaphezu kweyodwa. Noma kunjalo, uyabona, konke okubenyezelayo yigolide.
Ibamba ukukhanya kwelanga futhi yenza iphinikhodi yakho yokuhweba yangokwezifiso ikhanye! Yeka ukucwebezela okubhekwa njengokubalulekile!
Lapho iphinikhodi ikhanya, abanye abadlali bafuna ukuyishintsha!
Isici se-flash powder ukuthuthukisa umphumela wokubuka womkhiqizo, ukuze izingxenye zokuhlobisa zibe nomuzwa we-concave convex kanye nomuzwa we-dimensional emithathu.
Izici zayo yilezi: ukukhanya okuphezulu kwe-flash kwenza umhlobiso ube muhle kakhulu, ugqame kakhulu futhi ucace elangeni. Bakha imiphumela ekhethekile, edonsa amehlo, njengokuhlobisa noma ukucabangela.
Akungabazeki ukuthi singangeza umbala we-flash koqweqwe lwawo ukuze wenze izikhonkwane zakho zoqweqwe lwazo zikhanye.
Ngokuvamile sikhetha umbala we-flash powder oseduze kakhulu nomphumela obonakalayo ngokuya ngekhodi yombala efakazelwa umklamo wakho.
Kodwa-ke, kulesi simo esivamile, enye i-flash powder izokhanyisa eminye imibala, ngakho-ke kuyoba igebe phakathi kombono wakho wangempela we-flash koqweqwe lwawo olunamathelayo.
Lapha, labo abaphishekela ukupheleliswa kufanele banake kakhulu leli phuzu;
Uma udinga lezo zimpushana ezinombala oqinile, noma umbala othile wempushana ekhanyayo, ukuze ugweme izinkinga zesikhathi esizayo, sicela ucele abasebenzi bethu bezentengiselwano ukuthi bakunikeze isampula yemidwebo ukuze uqinisekise ngaphambi kokukhiqizwa ngobuningi kwezikhonkwane zoqweqwe lwazo ezibenyezelayo.
Okwedlule: Iphinikhodi ye-lapel ye-Digital Phrinta
Olandelayo: Khanyisa Izikhonkwane Zelebula Elimnyama